महाशिवरात्रीको रात सुत्नु हुँदैन, किन ? – " सुलभ खबर "
अधिकांश मानिसहरु शिवरात्रीको दिन भगवान शि,व,को आराधना गर्छन् तर धेरैलाई यो थाहा नहुनसक्छ त्यसदिन शिवको आ,रा,ध,ना किन गरिन्छ ? धेरैको बुझाइ एकै नहुनसक्छ । कोहि भगवान शिवलाई खुशी पारी वरदान लिनका लागि त कोहि अरुले गरेको देखेर पनि गर्छन् । तर यसको मुख्य कारण भने अर्कै छ ।
शास्त्रीय मान्यताअनुसार मानिस जिवित रहँदा उसले गरेको पाप पुण्यका आधारमा मृत्युपछि स्वर्ग वा नर्क जाने